Mason chirongo fekitori - China Mason chirongo Vagadziri, Vatengesi
750ml chikafu-giredhi remasoni chirongo
Kugadzirira Kwekudya uye Kuchengetedza:
Iyo chirongo chakakwana Kugadzirira maSaladi ako ebasa kana chero kubvakacha kwerudzi, uye zvakanaka kuti uchengete chikafu chako nechiyero chakaenzana chekudya chakagadzirirwa zuva rega rega revhiki
Unogona uye chengetedza yako yaunofarira jamu uye jellies uye nezvimwe zvakawanda.
Nzvimbo huru yekuchengetera oats, furawa, shuga, chikafu chembwa, kana zvekudya! Iwe unogona zvakare kuchengeta pizza muto, salsa, gazpacho, muto, uye maple manyuchi mumidziyo zvakare!
500 ml yemasoni mukombe nehuswa
Yakagara yakajeka girazi remasoni mitsara ine isina simbi mabheji uye mashanga
Yakakwana yekushandira makapu ezvinwiwa zvakasanganiswa, smoothies nezvimwe zvinwiwa zvinotonhora
Yakanakira muchato, bhawa, imba, pati, kana chero kuungana kwevanhu
Chipo chikuru chipo kune shamwari uye mhuri
500ml girazi chirongo chikafu
Kuchengetedza kubva kuDiki kusvika Kukuru
Pane kumwe kunopera kwetambo yedu, iwe unogona kunakirwa yedu yenguva dzose chirongo chemuromo, chiAmerican classic iyo yakadzvanya pamba pekudya canning craze. Asi pane zvakawanda zvazvino uno zvekushandisa kweiyi inozivikanwa saizi chirongo kusanganisira yakarongedzwa makuki musanganiswa, jecha hunyanzvi uye kumba kwakagadzirwa kukwesha. Kupesana nechirongo chidiki, kunogara mukanwa muhombe, wakapamhama Ball Mason Jar inova yakakosha kuchengetedza majusi kana maapuro, pamwe nezvimwe zvakasiyana zvinoshandiswa sekuchengetera hofisi kana hunyanzvi uye zvigadzirwa zvehunyanzvi.
Zvirongo zviviri zvine Miromo Miviri Yakasiyana Kuvhurika
Iyo yenguva dzose mitsara yemuromo yakapetwa uye inopa kuvhura kudiki kumusoro, nepo yakafara miromo miromo inopa kuvhura kwakakura kumusoro. Iko kune kwakasarudzika mabhenefiti kune yega yega mhando yekuvhura, uye iwe unogona kusarudza kuti riini uye sei kushandisa yega yega mhando nenzira ichakubatsira iwe uye kuzadzikisa zvaunoda.
50ml yemasoni chirongo
ZVOKUDYA GRADE: Imwe neimwe masoni chirongo chakagadzirwa nechikafu chegiredhi zvinhu, chakanakira kuchengetedza chikafu. Yakareba girazi muviri, zvivharo zvesirivha zviri Lab Certified Corrosion-Resistant zvinhu uye inodarika FDA chengetedzo zviyero.
CHISIMBISO CHISIMBISO: Simbisa mhando yemhando ine muvharo wega wega. Yakanaka uye Inoshanda, rega kicheni yako izere nerutsva pfungwa yezvinyorwa nehunyanzvi, retro pfungwa, chengetedza nyowani kwenguva yakareba!
VERSATILE & MULTIPURPOSE: Yakanakira jamu, jelly, chikafu chevacheche, zvinofadza zvemuchato, zvinonhuwira, huchi kana zvipo zvavo zvekugadzira. Yakanaka yezvinonhuwira, miriwo, pie nezvimwewo, yakakwana kukicheni, imba yekutandarira, bhati uye chero chiitiko!
DZIDZA KUSVIRA: Dishware safe inoita kuti zvive nyore kwazvo kuchenesa, kana iwe unogona kuzvishambidza nemvura nesipo, zvisina kunetseka!
500ml chikafu-giredhi masoni chirongo
Ichi chigadzirwa chakagadzirwa negirazi inochengetedza zvakatipoteredza, inoyevedza, yakasimba, inopfeka uye ine hupenyu hwakareba hwebasa.
Muromo webhodhoro unotsvedzerera uye wakakomberedza, uye muromo webhodhoro iri wakakwenenzverwa.Iyo yakachengeteka, yakatsetseka uye yakatenderera, uye pasi pebhodhoro rakasimba uye gobvu.
Ruvara rwevhavha ndiyo yekutanga girazi, iro rakafurwa nemaoko uye risina post-kurapwa kudhaya!
450ml chikafu-giredhi masoni anogona nehuswa
480 ml girazi remasoni mukombe nehuswa
500ml girazi remasoni mukombe nehuswa
500ml yemasoni chirongo nehuswa
600 ml girazi remasoni mukombe
Chikafu chegiredhi nharaunda 450ml yekutanga masoni chirongo
200ml chikafu giredhi remason chirongo
Nyore kuvhura muvharo: Iwo Midziyo ine anomhanya uye ari nyore kushandisa muvharo
Sheer, Ona kuburikidza neChivharo: Zviri nyore kuziva zvirimo pasina kuvhura yega yega
Shatterproof Muviri: A Novel Shatterproof muviri kugadzira canister kukanganisa kusagadzikana
Stackable: Unogona kurongedza midziyo imwe pamusoro peimwe, Space yekuchengetedza canisters, Inokubatsira kuronga yako kicheni
Iyi mhepo yakasimba haina mahara kubva kuBPA (Bisphenol A), iyo inokonzeresa njodzi dzehutano kana ikasangana nechikafu nezvinwiwa, ichivimbisa mararamiro ane hutano uchishandisa Bisphenol A yemahara Zvigadzirwa.